नेपाली मोडलहरुको सेक्स अनुभवहरु
Topic: नेपाली मोडलहरुको सेक्स अनुभवहरु
Author Topic: नेपाली मोडलहरुको सेक्स अनुभवहरु (Read 11955 times)
« on: September 21, 2015, 01:13:52 AM »
sex experiences of Nepali models ...
Re: नेपाली मोडलहरुको सेक्स अनुभवहरु
« Reply #1 on: September 21, 2015, 01:19:44 AM »
अचेल समय कसरी बिताउदै हुनुहुन्छ ?
त्यस्तो खासै केही छैन ।
कति भयो कलाकारितामा होमिएको ?
लगभग दुई बर्ष भयो ।
म्युजिक भिडीयो अभिनय मात्रैकी चलचित्रको पनि अनुभव छ ?
भिडीयो त धेरै गरे । चलचित्रमा अभिनयको अनुभव छैन ।अब चलचित्र अभिनय गर्ने सोंचमा छु ।
कुन निर्मातासँग काम गर्ने चाहाना ?
यो क्षेत्रमा आउने चहाना कसरी जाग्यो ?
यो क्षेत्रमा नाम र दाम दुबै कमाइने भएकोले यस प्रति मेरो मोह पलाएको हो ।
तपाइलाई कला क्षेत्रमा आउन सबै भन्दा धेरै कसको साथ छ ?
परिवारको प्रेरणा र हौसलाले म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हु ।
तपाईको बिचारमा सेक्सको परीभाषा ?
प्रकृतिको देन हो । जुन सफल जिवनका लागि अनिवार्य छ ।
सेक्स किन गरिन्छ ?
सम्बन्धलाई लामो समयसम्म लैजान ।
सेक्सको अनुभव छ कि छैन ?
छ , किन नहुनु नी ।
कत्तिको छ ?
सेक्स रमाईलोका लागि गर्ने गरिन्छ । तर यो कतिपटक गरियो भनेर गन्ति गरिन ।
कोसँग पहिलो सेक्स ?
अरु को सँग हुनु नी प्रेमीसँग ।
प्रेमीको नाम भन्न मिल्छ ?
नाई त्यो त नसोध्नु मेरो प्रेमीले (मामु ) थाहा पाएपछी मलाई त मार्छ ।
कुन क्षेत्रमा काम हो ?
यहि चलचित्र क्षेत्रमा नै हुनुहुन्छ ।
चलचित्र क्षेत्रमा के काम गर्नुहुन्छ ?
सफल निर्माता हुनुहुन्छ ।
उहासँग पहिलो भेट कहाँ भयो ?
फेसबुक मार्फत हामी एक अर्काेको नजिक भयौं ।
फेसबुकमा साथी बनेको कति समय पछि प्रत्यक्ष भेट भयो ?
तीन महिना पछि ।
तपाईको प्रेमीसँगको सेक्स सम्बन्ध कहाँ कहाँ हुन्छ ?
उहाँकै घरमा ।
विवाहित हुनुहुन्छ की अविवाहित ?
विवाहित हुनुहुन्थो तर अहिले डिभोर्स भईसक्यो ?
तपाई फिल्ममा अंगप्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ?
कथाले मागेपछि गर्नैपर्छ ।सक्छु
बिवाह गर्ने उमेर त भएन र ?
भाको छैन ।
कुराकानी गरिदिनुभयो धन्यवाद ।
हस् धन्यवाद तपाईलाई पनि ।
नेपाली रजतपटक डटकमको लागि विकास लामिछानेले गरेको कुराकानी
- See more at: http://kathmandutoday.com/2014/01/29184.html#sthash.xcDxhT8L.dpuf
« Last Edit: September 21, 2015, 02:00:41 AM by nepalima »
« Reply #2 on: September 21, 2015, 02:20:03 AM »
naina shree rana>>>>>>>>>>>>
पछिल्लो समय नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने धेरै नयाँ मोडलहरु आफ्नो करियर बनाउन यसक्षेत्रमा लागेका धेरै भेटिन्छन् । तर करियरको लागि यसक्षेत्रमा प्रवेश गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपनि यसक्षेत्रमा भविष्य छैन भन्दै मोडलिङ् क्षेत्रको सपना पनि देख्न छाडिसकेका छन् धेरैले ।
तर यति बेला मोडलिङ क्षेत्र छोड्नेको संख्या भन्दा पनि भित्रिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । यस्तै भिडकी एक नव मोडल यसक्षेत्रमा करियर खोज्दै भित्रिएकी छन् । ती मोडल हुन्, नैनाश्री राना । धरानमा जन्मिएर हाल काठमाडौंको कपनमा बसोबास गर्दै आएकी नैनाले यसक्षेत्रमा मात्र २र३ महिना विताएकी छिन् ।
यति छोटो समयमा धेरैको धेरै थरी कुरा सुनिसकेकी बताउने नौना भविष्यमा राम्रो कलाकार बन्ने सोचाइमा छिन् । सानैदेखि अभिनयको सोख चढेको बताउने नैनाले २र३ महिनाको अवधिमा एउटा म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी छन् । गीतकार माधव निर्दोष र संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठको ‘आत्मीयता’ एल्बममा समावेश भएको नरेन्द्र प्यासीको स्वरवद्ध गीत ‘तिमीबाट टाढा हुँदा’ बोलको गीतमा नैनाले अभिनय गरेकी छन् । उनै मोडल नैनाश्री रानासँगको कुराकानी :
पछिल्लो समय के मा व्यस्त हुनुहुन्छ र ?
अहिले अरु गीतहरुको म्युजिक भिडियोमा व्यस्त छु । कति भयो यसक्षेत्रमा प्रवेश गरेको र? यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको त्यहि दुई तीन महिना भयो ।
कति वटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्नुभएको छ र ?
मेरो पहिलो म्युजिक भिडियो नै आत्मीयता एल्बममा समावेश भएको नरेन्द्र प्यासीले गाउनु भएको ‘तिमीबाट टाढा हुँदा’को गीत नै हो । के चढ्नु हुन्छ रु गाडी, स्कुटी वा सार्वजानिक गाडी नै १ म सार्वजानिक गाडी नै हिड्छु ।
अहिले अन्तरवार्ता लिइरहेको अबस्थामा तपाईसँग कति हजार सम्मको गरगहना र लुगा छ र ?
अहिले त मैले धेरै बोकेको छैन । तपाई नै अनुमान लगाउनु न ।
तपाईको साथमा कति रुपैयाँ जति पैसा पर्समा कहिले छुट्दैन् र ?
तपाई कतै बजारमा जाँदा सबैभन्दा मनपर्ने लुगा तपाईको कुन हुन्छ र ?
तपाईलाई आफनै अंग सबैभन्दा सेक्सी लाग्ने र ?
एउटा म्युजिक भिडियो खेल्दा त्यस म्युजिक भिडियोका निर्माता, निर्देशकले एउटा मोडलसँग के अपेक्षा गरेका हुन्छन् र ?
तपाईलाई कसैले म म्युजिक भिडियो वा फिल्म खेलाइदिन्छु म सगँ सेक्स गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताब राखे की राखेनन् र ?
धेरैले राखे । नाम चाँही भन्न चाहदिन । तर म अभिनय सेक्समा साट्ने केटी होइन ।
अहिले हेर्ने गर्नुहुन्छ कि हेर्नु हुन्न ?
- See more at: http://www.biswokhabar.com/2014/08/blog-post_276.html#sthash.Nv06JT6K.dpuf
« Reply #3 on: October 12, 2015, 04:10:07 PM »
« Reply #4 on: October 15, 2015, 12:16:49 PM »
किशोर रानामगरको निर्देशन रहेको चलचित्र कारबाहीबाट आफ्नो फिल्मी करिअर सुरुआत गरेकी नायिका महिमा सिलवालले हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा मुख्य भूमिका निभाएकी छिन् । २३ वर्षीया महिमासँग गरिएको कुराकानी :
– म अहिले नयाँ अनटाइटल फिल्मको सुटिङमा व्यस्त छु ।
० चलचित्र क्षेत्र लाई तपाई कुन रूपमा लिनहुन्छ ?
– चलचित्र क्षेत्र सामाजिक सेवाजस्तो लाग्छ ।
० कस्ता चलचित्रहरूमा अभिनय गरिरहनुभएको छ ?
– अहिलेको जेनेरेसनलाई समेट्ने फरक खालका सिनोमा अभिनय गर्ने गरेको छु ।
० जेनेरेसनलाई समेट्ने नाममा अश्लील चलचित्र निर्माण भइरहेका छन् र यसमा नायिकाहरूले अंगप्रदर्शनमा बढी नै उदारता देखाउने गरेका छन् नि ?
– एकाएक चर्चामा आउनका लागि केही यस्तो गरेका हुन् । यसलाई म राम्रो मान्दिनँ ।
० नायिका नभएको भए के बन्नुहुन्थ्यो ?
– सायद नर्स बन्थेँ ।
० आफने शरीरको मनपर्ने अगं ?
– ओठ र आँखा ।
० अहिलेसम्म अफेयर चलेको छ कि छैन ?
० प्रस्ताव नै आएनन् कि ?
– प्रस्तावहरू धेरै आएका थिए तर म धेरै नै घमण्डी भन्न रुचाउँछु आफूलाई । म राम्री पनि छु । भाउ खोज्दा खोज्दै आजसम्म खाली भएँ ।
० तपाईंको विचारमा सक्ेस के हो ?
– सेक्स प्राकृतिक देन हो ।
० सेक्सको अनुभव छ ?
– म अहिलेको जेनेरेसनकी केटी हँु, अनुभव छ ।
० ब्वाईफ्रेन्ड छैन भन्नुभयो अनि ?
– तपाईले मलाई ट्रयापमा पार्नुभयो के भयो भन्दा घरबाट अलिअलि बिहेको कुरा चलेको
थियो । बिहेको कुरा चलेको केटासँग घुलमिल हुने क्रममा त्यस्तो भयो । तर, पछि मेरो करिअर
स्टार्ट हुने बेलामा हामी अलग भयौँ ।
० भनेपछि तपाईले धोका दिनुभयो ?
– अँ, त्यस्तै त्यस्तै भन्नुप¥यो ।
० केटामान्छेको के कुराले तपाईंलाई आकर्षित पार्छ ?
बानी र हाइट ।
(शक्तिप्रज्वल घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
« Last Edit: October 15, 2015, 12:31:26 PM by nepalima »
« Reply #5 on: October 15, 2015, 12:46:00 PM »
जुन केटासँग मैले पहिलो सेक्स गरे उसलाई सेक्स गर्नै नआउने रैछ : मोडल हरिशा
हरिशा बानिया, नेपाली मोडलहरुमा पुरानै नाम हो । हुनत उनी भिडियो सडक नाटकहरु मोडलिङ क्षेत्रमा आउनु पुर्वनै गर्दै आएकी थिइन् । बोके दाह्री नामक सिरियल उनको पहिलो हो । उनी मिस पूर्वाञ्चल पनि भइसकेकी छन् । नेपाली ग्यालमर लाइन पहिलेदेखि सुरु गरे पनि काठमाण्डौ आएपछि उनले मेरी बास्सै नामक सिरियलमा भूनियाको रोल गरिन त्यसपछि उनलाई कहिल्यै पछि फर्केर हेर्नु परेन । त्यसो त उनी नेपालका धेरै स्टेजहरुमा विदेशी गायीका साकीराको डान्स गरेर पनि चर्चित थिइन नै । प्रस्तुत छ उनैसंग गरेको कुराकानीः
मैले स्पेसल्ली यो काम यहि नै भनेर गर्दिन कहिलेपनि । किनभने, म एक्ट्रेस अनि मोडल पनि हु । टि. भि. सिरिएल, म्युजिक भिडियो, टीभीसीमा काम गरिराहुन्छु । अहिले पनि गरिराछु । यो भन्दा अगाडि सिरियलमा मेरी बास्सै गरिरहेकी थिए । मैले आफनो सानो कामले गर्दाखेरी त्यसलाई कन्टिन्यु गर्न सकिन । आज भन्दा २ महिना अगाडिको कुरा हो, मैले फोटो सुट गरे । अब म चाहि आफ्नै काम गरौ भनेर सोचिहेको छु ।
आफ्नै काम भन्नाले ?
बिजनेस ओमन बन्ने मेरो इच्छा छ, हेर्दै जाउ के हुन्छ ।
प्लानिङ के छ ?
मैले १३ बर्षको उमेरदेखि यो क्षेत्रमा काम शुरु गरे । म अहिले २३ बर्षकि भए । अहिले उमेर पनि बदलिरहेको छ । अहिले म खास कन्फ्युज चाहि किन भएकी छु भने मेरो घरमा बिहेको कुरा चलिहेको छ । बिबाह गर्नैपर्छ भनेर कुरा आईराछ घरबाट । त्यतिको लागि म कन्फ्युज हो । मलाई धेरै आएका छन्, काम आएपनि मैले काम नगरेको कारण त्यो नै हो । तर, अब स्टार्ट गर्छु कामहरु फेरी । फ्युचरमा यदि मैले सोचे झै भयो भने म नेपालमै राम्रो प्रशंशा गर्न लायक रेष्टुरेण्ट खोल्नेछु । म गोवा घुम्न जादै छु । आएपछि बिचार गर्नुपर्ला ।
फेरि पनि सिरिएलमा आउने की ?
म त्यो भाग्यमानि मोडल, एक्ट्रेस हु । जसले सानो रोल गर्दा पनि दर्शकहरुले धेरैनै माया गर्नु भयो । मेरी बास्सैमा मैले धेरै रोल गरेको पनि थिईन थोरै थियो भूनिया भन्ने रोल । तर, पपुलारिटि धेरै कमाए । त्यस्तै फेसन सो पनि मेक्सिमम गरे । पहिलेदेखिनै मोडलिङलाई अगाडि बढाए । सिरिएलमा मेरी बास्सै भन्दा अरु नगरौ कि भन्ने सोच छ । त्यस्तै राम्रा राम्रा आईटम सङ्गस् गर्छु होला, तर हिरोईन बन्ने ईन्ट्रेस्ट नै छैन ।
हिरोईनको लागि अफर त आयो होला नी ?
अफर आयो । मैले २ वटामा काम पनि गरे ।
प्रायः त मोडलिङबाट छिर्ने अनि हिरोईन भएर निस्कने हुन्छन् ?
मलाई चाहि फेसन सो गर्न मनपर्छ । राम्रो व्यानरको बिज्ञापनहरु गर्न मनपर्छ, म्युजिक भिडियोहरु गर्न मनपर्छ अरु कुनै सोचाई नै छैन ।
सुरुमा र्याम्पमा हिड्दाको अनुभव ?
कन्फिडेन्स ममा बच्चै देखिनै थियो, कहिले पनि होपलेस भईन । र्याम्प त्यस्तै म्युजिक भिडियो गरे मैले, धेरैमान्छेबाट राम्रो रेस्पोन्स पाए । नेपालका जतिपनि दर्शकहरु हुनुहुन्छ उहाहरुले नै मलाई रुचाईदिनुभयो । आजसम्म हरीसा बाँनीयालाई नराम्रो भन्ने मान्छे मैले पाएकी छैन । मेरी बास्सैेबाट पनि मन पराउनु भयो । है । मलाई नेशनल, ईन्टरनेशनलका मान्छेहरुले चिन्छन खुसि लाग्छ ।
मैरी बास्सैको पपुलारिटिले देश बिदेश घुमायो ?
हो, म ६,७ देश गए । अब नर्बे जाँउ कि भनेर सोचिरहेकि छु ।
के को लागि जाने नर्बेमा एक्टिङका लागि अथवा फेसनका लागि ?
नर्बेमा मेरो एकदमै राम्रो साथी हुनुहुन्छ फोटोग्राफर । उहाँले मलाई नर्बेमा आउ हरीसा तिम्रो ईन्डिएन जस्तो लुक छ तिम्रो फोटो पनि राम्रो आउछ, तिमिले बाहिर ट्राई गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभाछ । जानको लागि कुनै प्रोबलम त छैन । तर, के गरौ के नगरौ भन्ने भईराछ ।
मोडलिङ क्षेत्रमै केहि गर्ने सोच छ ?
मोडलिङमा स्कोप नै छैन । आज मलाई भन्न लाज लाग्छ । यतिधेरै बर्ष भईसक्यो यसमा लागेको । मैले यो क्षेत्रमा धेरै काम गरे तर के गर्ने नेपालमा यसको स्कोप नै छैन । यहाँ गरेको ८,९ बर्षको स्ट्रगल यदि बाहिर गरेको भए यो टाईममा म एकदमै टपको मोडल बनिसक्थे ।
कति कमाउनुभयो यो ८,९ बर्षसम्म ?
मैले आजसम्म गलत बाटो नपकडेर मेरो एक्लो जिबनमा मलाई पुग्ने गरेर कमाएकी छु । ठिकै छ । मलाई जस्तो ठाँउमा बसेपनि खान लगाउन पुग्छ ।
बिबाह कहिलेसम्म गर्ने प्लान छ ?
घरमा कुरा भइराछ तर मलाई बुझने केटा नै पाईराछैन । मैले माया गर्ने भन्दा पनि मलाई माया गर्ने केटा चाहिन्छ मलाई । पहिले मेरो ब्यायफ्रेण्ड त थियो तर ब्रेकअप भयो ।
ब्रेकअप कसरी भयो ?
मैले छोडिदिएको उसलाई, केहि एक दुईवटा कुरा मन नपरेर । उसंग विवाह गर्ने भनेरै अफेयर चलेको थियो । तर छुट्यो । म सिंगल हो अहिले । अहिले भेट हुदैन, ऊसंग १ बर्षको रिलेशन थियो, ब्रेकअप भएको ३ बर्ष भइसक्यो । आ–आफ्नो भाग्यको कुरा हो, ऊसंग लेखिएको थिएन बस् यति । नेपाली केटाहरु मन पर्दैन मलाई ।
भनेपछि विदेशी ताक्नुभाछ ?
त्यस्तो होइन, आइ एम सिंगल राइट नाव, मैले एकदमै माया गर्थे उसलाई.. द्याट टाइम आइ एम स्टिल भर्जिन, बट आइ एम नट स्टिल भर्जिन राइट नाव । अविवाहित केटीले कसैसंग रिलेशन राख्छे भने उसंग विवाह गर्ने विश्वासले त रिलेशन राख्छे नि । फस्र्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्छन्, मेरो लागी ब्याड इम्प्रेसन भयो । त्यो केटा गुड लुकिङ, एकदमै रिच फ्यामेली थियो । तर, ऊ धेरैनै प्ले ब्वाय रैछ पछि थाहा भयो । उसले मलाई माफी पनि माग्यो तर मैले माफी दिइन । आइ एम नट टिस्यू पेपर । यदि मसंग कमजोरी भएको भए मलाई त्यही केटा चाहिन्छ भन्ने हुन्थ्यो नि, त्यो भन्दा म कम छैन । ३ बर्ष अगाडी २० बर्षको हुदाँ उसंग मेरो रिलेसन थियो, अहिले २३ बर्ष भए त्यसपछि कसैसंग रिलेशन छैन । तर, साथीहरु छन्, घुम्न जान्छु, हास्छु, बोल्छु । म सिगरेट पिउदिन, ड्रिङ्स गर्दिन ।
कस्तो केटाको खोजिमा अहिले ?
मलाई आफ्नो खुट्टामा उभिएको केटा मन पर्छ, आफुलाई माया गर्ने होस् । समझदारी धेरै नै होस् । मलाई अरु केहि पनि चाहिदैन । पैसा भनेको त हातको मैला हो, आज छ भोली छैन । भोली बुढाबुढी मिलेर नि कमाउन सकिन्छ ।
केटीहरु प्रायः केटा धनिनै होस् भन्ने हुन्छन् रे ?
आ–आफ्नो सोचाई हो । पैसा त मसंग पनि छ नि, मैले सो पो नगरेको हो त । मलाई पुग्ने सम्पत्ति त कमाई सकेको छु नी । मलाई आफुलाई बुझने भए हुन्छ । मिडिया लाईनमा लागेको मान्छे, म भोली धेरै मान्छेहरुसंग हिड्नुपर्ने हुन्छ , बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबेलामा मलाई बुझोस् । छोरी मान्छेको इज्जत गर्ने केटा मन पर्छ । अरुको कुरा सुन्ने होइन, जे हो मलाई सोधोस् । तर मैले त्यस्तो केटा पाईराछैन । मैलै सबै केटीहरुलाई यहि सल्लाह दिन्छु, कहिलेपनि केटाहरुको बाहिरी रुपलाई हेरेर नजानु नै राम्रो हुन्छ त्यस्तो आकर्षणमा नफस्नुहोला ।
तपाईको फस्ट रिलेशन सेक्सको अनुभव ?
ओ..हो… नसम्झाउनु । फस्ट टाइम रिलेशन राख्दा पेन भएको फिल गरे । तर, इन्जोय मैले गरिन । मैले जोसंग रिलेशन राखे त्यो केटा भर्जिन थिएन । उसको अरुसंग पनि रिलेशन भइसकेको थियो, मेरो फस्ट टाइम थियो । त्यो केटाले अरुसंग रिलेशन राखिसके पनि उसलाई सेक्स भनेको थाहा नभएको जस्तो लाग्यो । म उसंग सेटिस्फाई भइन । किनकि त्यो मान्छेलाई सेक्स गर्नै नआउने रैछ ।
सेक्स कस्तो हुनुपर्ने थियो ?
मलाई वाइल्ड सेक्स मन पर्छ । सायद म टु मच सेक्सी भएर पनि होला । किन कुरा लुकाउनु र । त्यो समय आइ एम नट ह्याप्पी । लाइफमा आफु जस्तो छ त्यस्तै खालको पाटर्नर चाहिन्छ । यदि त्यो भएन भने दुर्घटना हुन सक्छ । छोरा मान्छे बिग्रिने कारण त्यही हो । श्रीमतीसंग रिलेशन राम्रो नभएपछि नै छोरा मान्छेले अरु केटी ताक्ने वा गर्लफ्रेण्ड बनाउने हो । यदि छोरा मान्छेमा त्यो प्रवृती आउछ भने छोरीमा आउन सक्दैन त ? त्यही हो ।
छैन रिलेशन भएको । थ्री इएर्स भयो ।
विना रिलेशन कसरी वाइल्ड सेक्सको कल्पना हुन्छ र ?
(लामो हाँसो ) त्यो त कल्पना गर्ने कुरै होइन गर्ने हो । म सेक्सको बारेमा कितावहरु पढ्छु । नजानेको कुराहरु सिक्ने गर्छु । जरुरी छैन कि तिमी सेक्स नै गर । फिलिङ्स आएको बेला मूभीहरु हेर्ने अनि आफुले आफुलाई इन्जोय गर्ने गर्छु । जो पायो त्यही संग रिलेशन राख्ने कुरा पनि हुदैन । भित्रै मनदेखि यो केटासंग सेक्स गरु भन्नेखालको कोही केटानै देख्दिन ।…. (हाँसो) त्यही एउटा थियो त्यो केटाले ब्याड इम्प्रेसन पार्यो त्यसलाई छोडिदिए । अरु ड्रिम ब्वाय मेरो लाइफमा छैन ।
विवाह अगाडीको सेक्सलाई राम्रो मानिदैन त ?
मलाई त्योसंग केहि मतलब छैन । मलाई समाजले खान दिने होइन, लाउन दिने होइन । मलाई राम्ररी थाहा छ कि यो समाजलाई कसरी ह्यान्डिलिङ गर्नपर्छ भन्ने । मैले जुन केटासंग गरे त्यो संग जीवन बित्छ भन्ने विश्वासले मात्र सेक्स गरेको हो ।
सेक्स कति आवश्यक छ जीवनमा ?
आवश्यकता किन छैन ? यो त खाना खाए जस्तै हो । मलाई ब्याकबोन प्रोबलम हुदा डाक्टरले एडभाइस दिएको थियो तपाई सेक्स गर्नुस् भनेर । अनि यो अवस्थामा समाजले औला उठाएर हुन्छ र ? हुदैन नि । कतिपय कुराहरुमा समाजले के भन्छ भन्ने हुदैन, यो मेरो पर्सनल लाइफ हो । कसैले कसैको फिलिङ्समा हस्तक्षेप गरेको म मान्दिन ।
तपाईलाई कस्तो केटा भएमा बढि सन्तुष्ट हुन्छु जस्तो लाग्छ ?
मेरो लाइफमा एट्राक्टिभ मान्छे हुनुपर्छ । जसलाई देखेर ममा सेक्स फिलिङ्स जागोस् । म जस्तै सेक्सी हुनुपर्यो । जुनदिन त्यो मान्छे भेटिएला त्यो बेला फिल गरुला ।
हरीषालाई आफ्नो सबैभन्दा मन पर्ने कुरा ?
(हाँसो) हा..हा…हा..म राम्री छैन तर एक्ट्रयाक्टिभ छु, स्विट एण्ड सेक्सी छु, आइ एम नट व्युटिफुल, बट स्विट एण्ड सेक्सी छु । मैले भन्दा पनि पब्लिकले तपाई एकदमै बुलेट हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ…..हा..हा…हा..।
मन पराउनेहरु धेरै छन् होला, उनीहरुलाई मन पर्ने तपाईको ?
(हाँसो) हा..हा…हा मन पराउने धेरै छन् । मेरो कसैले पनि केहि नराम्रो कुरा देखाउदै देखाउदैनन् । अर्को कुरा सबैले मलाई एउटै भन्छन् तिमि धेरै नै सेक्सी छौ । फेसबुकहरुमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ मैले नराम्रो कमेन्ट पाएकै छैन ।
धेरै नै सेक्सी देखेर अफरहरु कति आएका छन् ?
कति धेरै आको छ, छ । तर, त्यसलाई म नराम्रो मान्दिन । उसले मसंग केहि कुरा देख्यो र त त्यो भन्यो नी, त्यसमा चित्त दुखाउनुपर्ने केहि कारण छैन । तर, स्विकार गर्ने नगर्ने भन्ने फरक कुरा हो ।
फ्यानको सम्झना छ जसले धेरैनै प्रशंशा गरेको होस् ?
धेरै छ । अ..अ. म मेरी बास्सैको सुटिङमा दाङ गएको थिए, त्यो बेला एकजनाले मलाई आफ्नो जीउको सबै कपडा खोलेर एक चिज मागेको छ । म त्यो केटालाई कहिल्यै बिर्सन सक्दिन । त्यो केटाले सबैको अगाडि आई लभ यु भुनिया तिमिलाई पाइन भने म मर्छु भनेर भनेको थियो । सोह्र सत्र बर्षको उमेरमा म सानै थिए, अरु कुनै सेन्स फिलिङ्स नै आएन ममा ।
अहिले कसैले दाङमा भने जस्तै भन्यो भने नि ?
(हाँसो) हा..हा…हा म हास्छु । माया गर्न जसले पनि पाउछ तर, ब्वायफ्रेण्ड गर्ल फ्रेण्डको रुपमा होइन । फुलको आँखामा फुलै संसार । सबैलाई राम्रो सोच्नु पर्छ । कसैले प्रपोज गर्यो भने थ्याङक्यू भन्छु ।
त्यती मात्रै ?
त्यती मात्रै हो, म साथीहरुसंग घुम्छु, खान्छु तर, रिलेशन भन्ने कुरा फरक हो । पहिला जे भयो भयो, अब मेरो रिलेशन त्यहीसंग हुन्छ जोसंग मेरो विवाह हुन्छ । (हाँसो) हा..हा… अहिले त्यो त मैले लक गरेर आको छु हा..हा… कसैसंग हुदैन ।
संघर्ष के हो ?
म १३ बर्षको उमेरमा घर छोडेर आको केटी हो । संघर्ष त कति गरे–गरे । त्यही संघर्षले म यहाँसम्म आउन सके । कहिल्यै रङ वे समातिन..आफ्नो ट्रयाकमा हिडे । र, पनि मसंग सबै पुग्दो छ । रङ वे समातेको भए छिटो पैसा कमाउन सक्थे होला तर, संघर्ष गरिरहे अझै पनि गर्दैछु । मैले कहिल्यै रङ वे समातिनँ ।
- See more at: http://www.hamrosandesh.com/2014/04/7300.html#sthash.FhmtSKvh.dpuf
« Reply #6 on: October 16, 2015, 03:22:55 AM »
नायिका नन्दिता केसीले आफू हालसम्म कुमारी अर्थात् भर्जिन रहेको दाबी गरेकी छिन् । नायिका केसीले चलचित्र पत्रिका कामनालाई अन्तर्वार्ता दिँदै स्त्री–पुरुषबीच हुने प्रेममा हालसम्म नपरेको दावी गर्दै यौनका बारेमा भने मुख खोलेकी छिन् ।
कामनाका सम्पादक विदुर गिरीलाई केही समयअघि अन्तर्वार्ता दिँदै नन्दिताले भनेकी छिन्— ‘म भर्जिन छु । सानैदेखि रिलेसनमा बस्न मन लागेन । म यौनका लागि विवाह कुरेर बसेकी छु । म हण्ड्रेड पर्सेन्ट भर्जिन छु ।’ नन्दिताका अनुसार ‘यौनका बारेमा पूरै कुरा बुझ्ने भएपछि मात्र त्यस्तो रिलेसन राख्नु बेस हुन्छ ।’ ‘यौन प्रकृतिले दिएको देन हो,’ नन्दिता भन्छिन्—‘यौनले वैवाहिक जीवनलाई अझ सुन्दर बनाउँछ तर अहिलेका युवाहरू धेरै फरवार्ड छन्, यौन सस्तो भएको छ ।’ उक्त अन्तर्वार्तामा नन्दिताले यौनका बारेमा केही टिप्ससमेत दिएकी छिन् ।
उनको सुझाव छ— ‘यौनका लागि शान्त र गोप्य ठाउँ हुनुपर्छ, जहाँ कसैले पनि डिस्टर्ब नगरोस् । बुद्धि नपुर्‍याई गरिएको यौनसम्पर्क असुरक्षित मात्र होइन, अमर्यादित पनि हुन्छ ।’ नन्दिताले चलचित्रमा देखाइने यौनजन्य दृश्यप्रति टिप्पणी गर्दै भनेकी छिन्— ‘कतिपय चलचित्रमा यौन दृश्य आवश्यक हुन्छ तर कतिपयमा जबरजस्ती राखिएको हुन्छ जसले गर्दा दर्शकमा रोमाञ्चकता छाउनुको साटो वितृष्णा बढ्ने गरेको छ ।’
प्रकाशित: आश्विन २५, २०७२
nandita .jpg (29.01 kB, 600x350 - viewed 350 times.)
« Reply #7 on: October 27, 2015, 01:37:39 AM »
बाथरुममा ‘सेक्सी मोडल’ तिर्सनाको लुगा कस्ले खोल्यो ?
काठमाडौं । कलाकारहरु चर्चामा आउन बेला बेला अनेक हर्कत गरिरहन्छन् । अहिले मोडलहरुमा ‘सेक्सी’ भनेर चिनिएकी मोडल तिर्सना बुढाथोकी चर्चामा छिन् ।
उनको वाथरुममा कपडा खोल्दै गरेको तस्वीर सार्वजनिक भएर चर्चामा आएकी हुन् । तस्वीर हेर्दा निन्यारो पारामा देखिन्छिन् ।
तर उनले जबरजस्ती खोलेको हैन् भनिन् । पछिल्लो समय मोडलिङ्गमा जम्दै गएकी तिर्सना आफुले दर्शकलाई नयाँ वर्षको उपहार दिन वाथरुममा कपडा खोलेर तस्वीर खिचाएको बताईन् ।
केही समयअघि मात्रै उनको वाथरुममा नुहाउँदै गरेको फोटो सार्वजनिक भएको थियो । हेर्नुस् ‘सेक्सी’ मोडल तिर्सनाको वाथरुमका हट फोटोहरु :